Durban Metro Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - iNingizimu Afrika | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Durban Metro
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Durban Metro
Siyakwamukela ekamelweni lethu elithokomele lapho uzozizwa ukhululekile futhi usekhaya. Kunombhede omkhulu kanye negumbi lokugezela elihlukile elineshawa nendlu yangasese. Ikhishi elincane endaweni yekamelo lokulala libheke indawo engaphandle enetafula nebhentshi lapho ungahlala khona ngaphandle futhi ujabulele impilo yelanga neyezinyoni zase-Hillcrest. Sisekude ngemizuzu engu-5 ukusuka eHillcrest Hospital, imizuzu engu-3 ukusuka eKearsney College, imizuzu engu-5 ukusuka ezitolo futhi sifinyelela kalula emgwaqeni omkhulu. Sicela usho inani lezivakashi ekubhukheni kwakho.
Ikamelo elithulile, elinokuthula nekamelo elinegumbi elingaphakathi
Ikamelo liwubukhulu obuthokomele obunamagumbi okugezela angasese. (eshaweni kuphela). Kuzonikezwa itiye nekhofi. Ikamelo linendawo yalo yokungena. Le ndlu isemaphandleni enendawo yokupaka ngaphandle komgwaqo futhi isendaweni ethulile yamaqabunga enendlela yokungena kalula emgwaqeni omkhulu (nakuba ungeke uzwe umgwaqo omkhulu usuka endlini). Indawo engumakhelwane inikeza indawo enhle yokuhamba ngezinyawo noma egijima. I cherry phezu wukuthi sinalo inverter ngakho izibani uzohlala ngesikhathi ukuchitheka umthwalo!
Stork - Stunning unit with private patio.
Uma IBHUKHIWE: bheka ifulethi lethu elisha lase-Hadeda (Ukupheka ngokwakho)noma i-studio ethi Weaver-beautiful. Lesi sakhiwo sendawo yokudlela esizimele, esinezindawo eziqanjwe ngama-Storks ehlala njalo egcekeni lethu. Inekhishi eligcwele kanye netiye/ikhofi yamahhala. Indlu ihlukile futhi inendawo yayo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela futhi inepulangwe elikhulu elihle elibheke engadini encane. Ingadi yethu yomphakathi nendawo yokubhukuda iyatholakala kuwe. Singabantu 3kms kusukela Watercrest shoppingMall futhi ukuhamba kuya Kraantzkloof imvelo reserve.
Amasevisi athandwayo ase- Durban Metro ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Durban Metro
18 on Abelia no.1 (sleeps2)
Rock Rose Cottage - Home from home!
Contemporary & Spacious Courtyard Unit
I-Tennis Court Cottage, enokuthula nokuphumula
Private room with en suite bathroom and own entrance in safe home
☆Size: * S☆ M L XL XXL
Rock Haven Safe, clean and private Cottage